ရေခဲစက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူတရုတ် | ကျုပ်
လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်ပါဝါ (W): 5kw ~ 150kw ရေခဲပြင်ပုံစံ: Ice Block Dimension (L * W * H): 5580 (L) * 2240 (W) * 830 (H) mm အာမခံချက် - ၁ နှစ်သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများ - ဟိုတယ်များ၊ အထည်ချုပ်ရုံများ , ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ, စက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ၊ စားသောက်ကုန်နှင့်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ၊ ခြံ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ အိမ်အသုံးအဆောင်၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်၊ ပုံနှိပ်တိုက်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းအင်နှင့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ ဗွီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု, အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု, အပိုပစ္စည်းများ, ...
ပါဝါ (W): 5kw ~ 150kw ရေခဲပုံစံ Ice Block
အရွယ်အစား (L * W * H): 5580 (L) * 2240 (W) * 830 (H) mm အာမခံချက် - 1 နှစ်
ဒေသခံဝန်ဆောင်မှုတည်နေရာ: ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ အီတလီ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘရာဇီး၊ ပီရူး၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ မက္ကဆီကို၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ ထိုင်း၊ ဂျပန်၊ မလေးရှား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ချီလီ၊ ယူအေအီး၊ ကိုလံဘီယာ၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ သီရိလင်္ကာ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၊ တောင်အာဖရိက၊ ကာဇက်စတန်၊ ယူကရိန်း၊ အရောင်းပြခန်းတည်နေရာ: ယူကရိန်း၊ အီတလီ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘရာဇီး၊ ပီရူး၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ မက္ကဆီကို၊ ရုရှား၊ ထိုင်း၊ မော်ရိုကို၊ ကင်ညာ၊ အာဂျင်တီးနား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ၊ ကိုလံဘီယာ၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ သီရိလင်္ကာ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တောင်အာဖရိက၊ ကာဇက်စတန်၊ ယူကရိန်း၊ ကာဂျစ္စတန်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊
အခြေအနေ: အသစ် စွမ်းရည် 5000kg / 24
ဗို့အား: 380V / 3P / 50Hz အလေးချိန် ၁၈၀၀ ကီလိုဂရမ်
လက်မှတ်: စီအီး ရောင်းချပြီးနောက် - အခမဲ့အပိုပစ္စည်းများ, ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်ခြင်း, ကော်မရှင်နှင့်လေ့ကျင့်ရေး, လယ်ပြင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှု, ဗွီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု, အွန်လိုင်းထောက်ခံမှု, နိုင်ငံရပ်ခြားစက်ယန္တရားများအသုံးပြုနိုင်သည့်အင်ဂျင်နီယာများ
အဓိကရောင်းဝယ်ရေးအချက်များ - မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှု နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှု: ၅ တန် / ၂၄ နာရီ
ရေခဲပမာဏကိုပိတ် ၁၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲပြင်အထူ: 100mm; 120mm; 160mm; 220mm
တွန်း: Bitzer ရေခဲသေတ္တာ R22 / R404a
အအေးလမ်း: ရေ Coolig လျှောက်လွှာ လတ်ဆတ်သော - စောင့်ရှောက်, industry.etc
ပစ္စည်း အစွန်းခံသံမဏိ ချဲ့စက်အဆို့ရှင်: DANFOSS
တစ်ခုတည်းအထုပ်အရွယ်အစား: 558X224X83 စင်တီမီတာ
လူပျိုစုစုပေါင်းအလေးချိန်: 1800,0 ကီလိုဂရမ်
အရေအတွက် (သတ်မှတ်ချက်များ) 1 - 1 > 1
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ) 15538 ညှိနှိုင်းခံရဖို့
CSCPOWER GROUP CO ။ , LTD
၂.၁. ရေခဲသေတ္တာရေခဲစက် (တိုက်ရိုက်ရေခဲကိုအေးခဲစေရန်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းပြားကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ဆားငန်ကန်နှင့်အခြားအရန်ပစ္စည်းများ)
၁။ နေ့စဉ်စွမ်းရည် - တစ်နာရီလျှင် ၁ တန်မှ ၁၀၀ တန် / ၂၄ နာရီ။
ရေခဲတုံးချင်းစီ၏အလေးချိန် - ၅ ကီလိုဂရမ်၊ ၁၀ ကီလိုဂရမ်၊ ၁၅ ကီလိုဂရမ်၊ ၂၀ ကီလိုဂရမ်၊ ၂၅ ကီလိုဂရမ်၊ ၃၀ ကီလိုဂရမ်၊ .50kg … ၁၀၀kg ။ ငါတို့သည်လည်းသင်တို့အဘို့အစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
2.2.2, ကွန်တိန်နာ ရေခဲပြင်ပိတ်စက်
၁.၂၀ ပေကွန်တိန်နာ - ၅ တန်
2,40 ပေကွန်တိန်နာ: 10 တန်
ရေခဲ 3.Block: 10 ကီလိုဂရမ်, 25 ကီလိုဂရမ်။
1. တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော module ဒီဇိုင်း၊
1t, 5t, 10t ဆားရည်အိုင်အမျိုးအစားပိတ်ထားသောရေခဲစက်
အသုံးပြုသူမှတပ်ဆင်ခြင်း - တင်ပို့ခြင်းမပြုမီစက်ကိုကောင်းစွာစစ်ဆေးပြီးတပ်ဆင်ပါမည်။ တပ်ဆင်ခြင်းကိုလမ်းညွှန်ရန်လိုအပ်သောအပိုပစ္စည်း၊
ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးကိုအအေးခံကိရိယာမှအပအခြားသံမဏိဘောင်တစ်ခုတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအစက်အပြောက်တွင်တပ်ဆင်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ၎င်းကိုရေနှင့်လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်များနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးနောက်ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆိုပါ condenser ၏အအေးနည်းလမ်းကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
Exhibitionsir နှင့် Oversease
ရေခဲစက်လုပ်ကွက်သည်နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည်။ 1T, 3T, 5T, 10T မှ 100T အထိရရှိပါသလား။
၂။ မည်သည့်အမျိုးအစားကိုသင်ပိုမိုနှစ်သက်ပါသလဲ၊ ရေအေး၊ လေအေးသို့မဟုတ်အငွေ့ပျံစေသောအအေး (Mid East အတွက်)?
4. မည်သည့်ရေခဲသေတ္တာကိုသင်အသုံးပြုမည်နည်း။ R22 သို့မဟုတ် R404A?
၅။ ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့်အဆင့်သည်ဘာလဲ။
5.door ကိုသင်လိုအပ်လားမလိုအပ်လား။ ရှိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ နှိပ်ပါ www.cscpower.cn ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်။
ရှေ့သို့ Tube ရေခဲစက် -5T
နောက်တစ်ခု: အလွှာရေခဲစက် - လေအအေး -15T